Mudo intee le'eg ayuu kalluun noolaa? Soo gal oo ogow inta kalluunku soconayo | Kalluunka
Mudo intee le'eg ayuu kalluun noolaa?
Waxaa laga yaabaa inaad isweydiisay intee ayuu kalluun noolaa, waa maxay celcelis ahaan noloshiisa quraaradda runtiina waa taas, hubaal, kuuma sheegi karin tirada saxda ah ee sannadaha maxaa yeelay kalluunka wuxuu noolaan karaa saacado yar ilaa dhowr sano, waxay kuxirantahay marar badan kaluunka iska caabintiisa, inta sano uu jiro iyo waliba sida loo koriyo.
Markay leeyihiin haamaha kaluunka, maaha aquariums, kuwa xirfadlayaasha ugu badan waxay dhahaan way sii jiri karaan waa 2-3 sano maxaa yeelay kalluunka ma dheereeyo waqti badan culeyska ay ku dhex nool yihiin darteed. Qaar kale waxay yiraahdaan, haddii si fiican loo daryeelo, waxay sii socon karaan sanado badan oo ay kugula socon karaan noloshaada.
Runta ayaa ah in kalluunka aan soo iibsanaa ay badanaa yihiin da 'yar (qiyaastii 2 bilood jir) oo ay noo sii socon doonaan ugu yaraan dhowr sano haddii aan si fiican u daryeelno iyaga. Sidoo kale waxay kuxirantahay noocyada, waxaad ka dhigi doontaa mid dheer ama gaagaaban. Tusaale ahaan, kalluunka loo isticmaali jiray in lagu nadiifiyo daaqadaha, nadiifiyeyaasha, wuxuu socon karaa in ka badan 2 sano haddii ay fiicnaadaan oo aan la walwalin, marka lagu daro sii ballaadhinta.
Khubarada ayaa sheegaya in kalluunka, la dastuur wanaagsan oo si fiican loo daryeelay (ogaado intee in le'eg ayaad qaadan kartaa adiga oo aan wax cunin), way noolaan karaan 10-15 sano gudahood aquariums-ka (kuma jiraan taangiyada kalluunka) xitaa waxay ku dheereyn karaan da'daas waqti dheer, kana badnaan karaan eyga. Laakiin, sidaan kuu sheegay, waa inay noqotaa meel si wanaagsan loo daryeelo aquarium-ka oo aan waxba uga baahnayn.
A "xeer hagaya»Waxay noo sheegaysaa in cabirka celceliska nooc ka mid ah, uu sii weynaanayo cimri dhererkiisa, sidaa darteedna markii uu weynaado, uu sii dheeraado, inkasta oo ay tahay inaad tixgeliso tan aquarium-kaaga, haddana kalluun ma u baahan doontid aad u weyn maxaa yeelay way cuni kartaa kalluunka kale.
1 Mudo intee le'eg ayuu noolyahay kalluunka liinta
2 Mudo intee le'eg ayuu noolaadaa kalluunka jilicsan?
3 Mudo intee le'eg ayuu noolyahay kalluunka xayawaanku
4 Mudo intee le'eg ayuu kalluunka guppy nool yahay?
5 Mudo intee le'eg ayuu kalluun biyo la’aan ku nool yahay?
6 Mudo intee le’eg ayuu kalluunku ku noolaadaa badda?
7 Mudo intee le'eg ayuu noolaadaa kalluunka biyaha qabow?
Mudo intee le'eg ayuu noolyahay kalluunka liinta
Inta badan kalluunka aan ka soo iibsanno dukaamada u heellan iibinta xayawaanka xayawaanka ah waxaa badanaa la yiraahdaa kalluunka liinta, kalluun ama kalluun dahab ah. Iyagu waa noocyada ugu caansan ee aan had iyo goor ku fiirsanno taangiyada kalluunka iyo aquariums-ka. Si kastaba ha noqotee, iyagu maahan kuwa ugu cimriga dheer.
Kalluunkani aad ayuu uga jilicsan yahay uguna jilicsan yahay sida aan moodno. Taasi waa sababta ay u jiraan xaalado aan ku iibsano mid ka mid ah xayawaanadan yaryar oo ay sii noolaadaan dhowr bilood oo keliya, iyo xitaa maalmo yar. Waa run in qaanuunkaan had iyo jeer la fulinin, maadaama daryeelka saxda ah, aan ka dhigi karno kalluunka liinta inuu ku adkeysto agteenna 2 sanado 3.
Waa in maskaxda lagu hayaa in kalluunkan lagu kaydiyo balliyo waawayn oo ay ku kobcaan oo ay si dhakhso leh ugu koraan, in kasta oo ay dhalinyaro yihiin Sidaa darteed, dhammaan muunadahaas ku jira dukaamada shimbiraha iyo dukaamada xayawaanku aad bay u da'yar yihiin.
Mudo intee le'eg ayuu noolaadaa kalluunka jilicsan?
ka kalluunka jilicsan waxay ka mid yihiin xayawaannada biyaha ugu soo jiidashada badan. Ay wax ku dhufatay midabka liinta iyo casaanka, oo lagu daro kuwooda Xargaha Cad, ka dhig mid aan la qarin karin. Waa run in kooxdan kalluunka dhexdeeda ah, in ka badan soddon nooc ay ku jiraan.
Hoygooda dabiiciga ah, kalluunkan waxaa laga helaa biyo diiran oo ah Badweynta Baasifiga, oo si ballaaran ay u deggen yihiin dhagaxyo dhuxul ah, oo ay weheliyaan anemones, kuwaas oo ka siiya iyaga kahortaga ugaarsadayaasha suuragalka ah isla waqtigaas oo ay bixiyaan ilo cunno oo kala duwan. Xaaladahaas, xayawaanadan ayaa ku nool inta udhaxeysa laba ilaa shan iyo toban sano qiyaastii, waxay kuxirantahay, haa, nooca kalluun oo aan tixraacno.
Si ka duwan noocyada kale ee kalluunka ee sidoo kale loo soo saaray nolosha maxaabiista, kalluunka jilicsan uma baahna daryeel aad u daal badan, sidaa darteed iyagu waa ikhtiyaar wanaagsan in lagu daro aquarium-keena, kaas oo, haddii aan wax qalaad ah dhicin oo si fiican loo daryeelo, waan ku raaxeysan karnaa iyaga 5 sanado 10.
Mudo intee le'eg ayuu noolyahay kalluunka xayawaanku
ka kalluunka kite Iyagu waa mid ka mid ah kalluunka aquarium-ka yar ee ugu caansan. Noocyadooda kala duwan ee kala duwan waxay ka dhigayaan iyaga xayawaan aad u soo jiidasho leh, gaar ahaan kuwa yaryar ee guriga ku jira. Marka ay doorbidayaan, waa in sidoo kale la ogaadaa inay yihiin dad aad u jajaban, sidaa darteed ma muujiyaan dhibaatooyin markay la noolyihiin noocyada kale.
Astaamahan oo dhan waxay ka dhigayaan kalluunka qaniisadda mid ka mid ah kalluunka ugu badan ee lagula taliyo dhammaan kuwa bilaabaya hiwaayadan. Intaa waxaa dheer, waa xayawaan aan u baahnayn daryeel badan, in kasta oo uu ka tirsan yahay qoyska kalluunka kite ama kalluunka dahabka ah.
Layaab ma leh in kalluunkan uu nolol ku dhex haysto laga bilaabo 5 ilaa 10 sano, ilaa inta si sax ah loo daryeelayo.
Mudo intee le'eg ayuu kalluunka guppy nool yahay?
ka kalluunka guppy Waxay ka mid yihiin noocyada ay soosaarayaasha iyo hiwaayaduhu aadka u xiiseeyaan. Noocyadan gudaheeda, waxaan ka heli karnaa shaqsiyaad aad u kala duwan midba midka kale, marka loo eego midabka iyo qaabdhismeedka, sidaas darteed caankiisa.
Waa xayawaan ku nool aagagga biyaha macaan, inta badan kuwa xilligan hooseeya sida wabiyada, harooyinka iyo balliyada. Deegaanka dabiiciga ah, waxaan ka helnaa wadamada Central America sida Trinidad, Barbados, Venezuela iyo waqooyiga ee Brasil.
Sifooyinka ay tahay in ay xanaaneeyaan biyaha xayawaankani waa inay ahaadaan: heerkulka u dhexeeya 22 iyo 28 digrii, 25 darajo oo ah kuwa ugu fiican; pH waa inuu noqdaa mid alkali ah, oo aan waligiis ka hooseyn 6.5 ama ka sareeyaa 8. Haddii aan ku guuleysano waxaas oo dhan, kalluunkan wuxuu awood u yeelan 2 sano.
Mudo intee le'eg ayuu kalluun biyo la’aan ku nool yahay?
Mid ka mid ah welwelka ugu weyn ee soo saarayaasha ayaa ah inta kalluunku ku noolaan karo biyaha. Iyo, liddi ku ah waxa aan u malayno, xayawaankani waxay ku adkaysan karaan xoogaa waqti ka baxsan deegaanka biyaha iyagoo kuxiran xaaladaha.
Haddii, biyaha ka baxsan, kalluunku ku jiro meel leh heerkulka qolka qabow oo lagu kaydiyo dusha sare ee aan qoyaanka si dhakhso ah u qaadanaynin, wuxuu ku sii jiri karaa nolosha ilaa ku dhowaad 1 saac.
Waxaa jira xaalado kalluunku ka soo booday, cajiib sida ay u muuqato, kalluunka ama balliga. Hadday taasi dhacdo, oo aan weli kalluunkeennii nool nahay, waa inaan ku soo bandhignaa sida ugu dhakhsaha badan uguna macquulsan weel ay isku biyo yihiin taangiga kalluunka ama balli. Intaas ka dib, waa inaan si tartiib ah ugu mayrinaa iyadoo la kaashanayo koob, si looga saaro wixii habaas ah ee suuragalka ah, iwm, ee ku dhegan maqaarkiisa. Aad ayey muhiim u tahay inaan maanka ku hayno inaannaan kalluunka xoog ku xoqin si aan uga fogaanno dhaawacyo dibadeed. Markii aan dhawr jeer fiirsaday horas 24 Weelka gudihiisa oo aan xaqiijino inay caadi tahay, waxaan u dhaqaaqi doonnaa inaan ku celinno haanta kalluunka ama balli.
Mudo intee le’eg ayuu kalluunku ku noolaadaa badda?
Nidaamka deegaanka ee badda waxaa ku jira noocyo aan dhammaad lahayn, qaar badan oo ka mid ahna waa kalluun. Noocyada kalluunka ee kaladuwan waxaa ka jira kala duwanaansho kaladuwan, rajada cimriguna kamay yaraan doonin.
Caadi ahaan, kalluunka ku nool badaha iyo badaha ayaa ka cimri dheer asxaabtooda isla sidaas oo kale ku samee harooyinka iyo webiyada. Waxaa jira kalluun si dirqi ah ku nool hal sano, halka qaar kalena ay nool yihiin illaa nus qarni. Marka laga reebo, sturgeons iyo groupers ayaa laga helay in ka badan 100 sano jir. Laakiin haddii aan samayn lahayn celcelis ahaan cimriga kalluunka badda, waxaan dhihi lahayn way ku dhowdahay 20 sano.
Haddii aan rabno inaan ogaanno inta sano ee kalluunku jiro, waxaa jira xeelad si macquul ah loogu kalsoonaan karo. Sida siddooyinka jiidaya jirridda geedaha, haddii aan eegno miisaanka kalluunka, waxay sidoo kale sawiraan xariiqyo koritaan taxane ah. Mid kasta oo ka mid ah sadarradan waxay ka tarjumayaan hal sano jir xayawaanka. Si tan loo sameeyo, waxaa lagama maarmaan ah in la isticmaalo muraayad weyneyn ballaaran, maxaa yeelay indhaha qaawan waa wax aan macquul aheyn.
Mudo intee le'eg ayuu noolaadaa kalluunka biyaha qabow?
Kalluunka qabow waxaa ka mid ah kuwa ku nool harooyinka, wabiyada, iyo dhammaan kalluunka guryaha ku jira ee loo kaydiyo aquariums-ka iyo taangiyada kalluunka. Waxaa jira noocyo badan, laakiin, si ka duwan kalluunka ku nool biyaha badda, waxay u muuqdaan inay ku noolaadaan waqti ka yar.
Haddii ka hor intaannaan dhihin kalluunka badda uu gaari karo nolol aad u sarreysa, xitaa gaaro 20 sano iyo tirooyin aad u sareeya, kalluunka biyaha qabow badanaa waxay leeyihiin cimri nololeed min labo sano ilaa 15 sano.
Waxaan rajeyneynaa in maqaalkeenna aad horey u heshay fikrad cad intee ayuu kalluun noolaa iyo rajada nolosha ee kalluunkan yar (oo aan aad u yareyn) ee aan inta badan ku haysanno guriga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Kalluunka » Kalluunka » Mudo intee le'eg ayuu kalluun noolaa?
kalluun yar dijo
sifiican kalluunteyda kalluunka wali waxay nooshahay 4 sano
Ku jawaab kalluun yar
liibaan :) dijo
Kalluunkeygu waa 5 sano jir wuxuuna ku jiraa haanta kaluunka walina wax badan ayaa harsan
U jawaab lyneth :)
Waxaan haystaa kalluun libaax oo hadda wuxuu noolaa 5 sano
Ka jawaab obed
Kalluunkeygu maanta wuu dhintay, 13 sano ayuu ila socday. Waxaan dareemayaa cabsi, waxaan lahaa burooyin madaxa saaran oo aad u soo kordhay baryahan. Subaxaan, wuu hurday markuu had iyo goor hurdada ka tooso oo galabtii ayuu dhintaa.
Thu XanuunTer Fresh dijo
Waxaan hayaa kalluun libaax illaa iminkana wuxuu noolaa muddo 13 sano ah laakiin isaga oo aan ka tagin isaga oo aan dayacin feejignaan
Ku jawaab Thu PainTer Fresh
Kalluunkeyga biyaha qabow waxay umuuqdaan kuwo dhimanaya, i caawi!
Ku jawaab superelisa
Kalluunkayagu mar hore wuu dhintay, wuxuu qaatay 4 bilood
kaluunkaygu aad buu u degan yahay mana doonayo inuu cuno !! Ma aqaano wuxuu haysto ... laba maalmood waxaan siiyay cunto kale Ma ogi inay taasi noqonayso. I caawi . waa sida geerida oo kale
Waxaan haystay kalluun dhintay bishii Maarso waxaanan tartamay dhammaadkii Diseembar
Jawaab Diego Martinez
kalluunkeygii oo 4 sano jir ahaa wuxuu dhintay wuxuu ahaa telescope weyn
Waxaan haystay kalluun loo yaqaan 'oscar fish' oo igu qaatay muddo 13 sano ah.
Ku jawaab nytcyvette
Sideen ugu sameeyaa pH iyo heerkulka haddii aan dhowr nooc oo cyclids ah ku haysto aquarium-kayga
Ku jawaab ani
curkeeygu waa 15 jir
Waxaan haystaa Acanthurus Achilles waxayna aquarium-kayga ku jirtay 4 sano bishii ...
Ku jawaab Achilles
waxay lahayd kalluun badan, kii ugu noolaa wuxuu ahaa fuulitaan: afar iyo toban sano !!!!!!! Wuxuu dhintey maalmo yar kadib markii eeygii aan isku da'da nahay uu dhintey maybe .. waxaa laga yaabaa murugo darteed inaanan arag, ma ogi inuu wax badan arki doono, laakiin markii Hercules u soo dhowaaday haanta kaluunka miisaanka dhaqaaqay sida aan idhi, haha ​​haha
Eygaygu horeyba wuu u joogey muddo saddex sano ah mana doonayo inuu wax badan dhaqaaqo wuxuuna ku sugan yahay meel taagan oo si dhakhso leh ayuu u neefsadaa
lis ximena dijo
sifiican maahan wax kastoo ay sheegaan inay run yihiin
Anigu waxaan ahay aqoonyahan cilmiga cilmiga badaha
Ku jawaab liis ximena
Waxaan soo jiitay jahwareer muddo 9 sano ah waana wax aad u weyn oo jirka uusan ku habooneyn calaacasha gacanta iyo mid kale oo ka yar da'da iyo cabirka
Waad salaaman tihiin, waxaan hayaa kaluun kaligiis ah oo ku jira haanta kalluunka 50 litir oo durba waxay jirtay ilaa 15 sano mana ogi inay intaas ka sii badantahay iyo runta ah in masaakiintu aysan lahayn daryeel weyn
Ku jawaab anahi
Hagaag, waxaan haystay kalluun liin dhanaan ah, noocaas oo markaas ku qaatay 100 pesetas, iyo taangiga dhalada ah, kuwii caadiga ahaa, waxaan ku noolahay 17 sano. Dabcan, beddelaadda biyaha laba-saddexdii maalmoodba mar oo had iyo jeer nadiifinta dhagxaanta ku jirta ceelka hoose.
In yar oo kalluun ah, waxay ahayd xoogaa riwaayad markii uu dhintay.
Waxay iiga tageen laba kalluun markay codsadeen, saddex maalmood ka dib way dhinteen afar sano ayey noolaayeen si fiican ayaan u daryeelaa laakiin ma ogi waxa dhacay.
Luis Eduardo Manotas sawirka booska dijo
Kalluunka Aequidens diadema (mojarrita) waa ugaarsi ka mid ah dirxiga dirxiyeyaasha (kaneecada) ee gudbiya Dengue, Chikungunya iyo Zica; waxay la jaanqaadaysaa biyaha balliyada guryaha ee loogu talagalay isticmaalka guriga waxayna hubisaa baabi'inta ujeeddooyinka kaneecada.
Jawaab Luis Eduardo Manotas
Kaluunkeygu mar hore waa 100, ma aqaan inuu kalluun yahay ama qoolley xD!
Kalluunkeygu wuxuu jiray 11 sano taangiguna waa 35 cm ilaa 16 cm, waana hagaag, isha ayaan ka waayey!
finala mila capellades dijo
waxaan haysannaa kalluun jira 20 sano
Ku jawaab finala mila capellades
Waxaan gurigayga ku haystaa kalluun taangiga kalluunka waxayna ku sii jireen 15 sano oo kale 16 sano (kalluun biyo ah oo dahabi ah iyo duug ah oo sidoo kale loo yaqaan nadiifiyayaasha hoose)
Hagaag, waxaan u beddelaa biyaha kalluunkeyga 3dii bilood ama ka badan waxayna ku jirtaa haan kalluun oo xitaa aan sii dheereyn karin hadda. Waxay naga dhigtay mid weyn! Waxaan rajeynayaa inay sii socoto 20 sano.
Xusuusin: waa mid ka mid ah waxyaabaha lagu qurxiyo biyaha qabow
Waxaan hayaa kalluun uu isagu abuuray oo ah molly waana sii jiray ilaa uu dhaqaaqay, wuxuu ahaa 3 oo wuu dilay hada kaligiis wuxuuna horeyba ila joogay ilaa 4 sano, kaluun kalluun fudud oo aan daryeel badan lahayn. Lagu daray si loogu isticmaalo tijaabada bayoolaji. Isagu ma dhiman karo hahaha.
Ku jawaab Stephanie
Waan jeclahay Maanta waxay leeyihiin tan gacan xiran. 5 sano biyo qabow haamaha kaluunka. Sida iska cad waxaan u badalay iyaga ka weyn. Laakiin waxaan jeclaan lahaa inaad sii noolaato ...
Waxay i siiyeen ilaa 17 kalluun yar oo biyo qabow ah 15-kii maalmood ee ugu dambeeyayna way dhimanayeen. Ma aqaan waxa ku dhacay iyaga. Waxay nala joogeen 4 bilood oo lagu daray 6 bilood ciddii i siisay.
Fadlan caawi dijo
Eygayga Dorozi ayaa cunay kalluunkeyga laakiin waxaan u maleynayaa inuu ku nool yahay maxaa yeelay waxaan maqlaa isaga oo neefsanaya
Jawaab si aad u caawiso fadlan
Waxaan hayaa telescopic 2-sano jir ah waana daryeelayaa si ay u sii socoto 5 sano oo dheeri ah.
Waa hagaag, runta ayaa ah, haddii ay waqti dheer sii jiri karaan, annaga oo guriga ku jira ayaa saddex kalluun ku dhex haysanay quraaradda tan iyo sanadkii 2008, mid baa dhintey 2 sano ka hor, ka dib mid kale siddeed bilood ka hor welina mid baa nool oo waannu sii haynaa.
Waxaan haystaa kalluun biyo qabow oo jaban, waa 9 sano jir, wuxuu ka badbaaday bilowgii hypothermia, oksijiin la'aan xitaa waxaan qabaa qaniinyo kalluun kale iyo sidii oo aysan ku filnayn Waqti ka waqti ayaan cunaa rootida, sidaas darteed waxaan waxaan u maleynayaa inay ila socon doonto waqti dheer, chiqui waa dhul dhan
Ku soo jawaab Cardenas
Kalluunkeygu wuxuu kamid yahay liinta oo wuxuu jira 20 sano, had iyo goorna kaligiis ayuu ku jiraa haanta kalluunka, hadda waa 20 litir
Waxaan haystaa 2 kalluun kalluunkaygu in ka badan 5 sano
CAAWIMAAD FADLAN ANIGU WAAN IDIIN TAAGEERAY LAMBARKAAGA dijo
CIYAARAHAYDA 3 MAALMOOD, MAXAAN SAMEEYAA 6 MAALMOOD IN KA DAMBAYSA 5?
Jawaab si CAAWIMO FADLAN ANIGU NAGA TAGAY LAMBARKAAGA
Waxaan hayaa kalluun dick ah oo aanan garanaynin inta uu noolaan doono laakiin dhaqdhaqaaqiisa ma joojin doono
Ku jawaab pollardo fernandez
Waxaan hayaa teendho liin dhanaan ah Waxaan ku hayaa isla weelkii ay igu siiyeen runtuna waxay tahay inay aad ii hayso. Kalluunku waa 5 sano jir. Kalluunkani wuxuu astaan ​​u yahay noloshayda, waxaan iibsaday markii ay Hiba ku jirtay sannadka ugu horreeya ee ESO haddana waxaan ku jiraa wareegga tababarka waan gartay waxay tahay. Haddii maalmahan midkood uu tago, qayb aniga iga mid ah ayaa la socota. Waxay u egtahay walaalka yar, si kasta oo ay u yar yahiin, waxaad u jeceshahay sida qaraabadaada.
Maxaad u sheegi weyday inta uu nool yahay ama intee buu noolaa?
Ku jawaab xiddig
Kalluunkeyga lebiasin ama weelkeyga wuxuu noolaa ilaa 12 sano wuxuuna u dhintey isagoo da 'weyn, wuxuu ficil ahaan u foorarsadey oo hal indhood ku indho la', marka laga reebo midabkeedu midabkiisu yahay cagaar-cagaaran oo ku dhowaadey inuu madow yahay oo caato yahay caloosha ... xitaa wuxuu xiiseynayay ugaarsiga kaluunka yar sida guppies-ka oo aan had iyo jeer cunto u siiyo ...
Waxaan jeclahay kalluunka way qurux badan yihiin waxaa jira noocyo badan oo mahadsan macluumaadka
Ku jawaab luis antago herrera betancourt
Kalluunka aan ku dhex jiro taangiga waligiis wuxuu noolaa in ka badan 15 sano, kalluunka dahabka ah ee aan hadda haysto waa mid aad u da 'weyn oo weli nool, waa inuu jiraa 16 ama 17 sano welina….
Jawaab Adriana Mazzantini